Guddoomiyaha XAQSOOR Oo Beeniyay Inuu Ku Baaqay Mudaharaad laga dhigo Hargeysa | Somaliland.Org
Guddoomiyaha XAQSOOR Oo Beeniyay Inuu Ku Baaqay Mudaharaad laga dhigo Hargeysa
December 11, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Urur siyaasadeedka XAQSOOR Md. Xasan Ciise Jaamac, ayaa beeniyay warar sheegayay inuu ku baaqay maalinta Arbacada ee beri inay taageereyaashiisu mudaharaad ka sameeyaan magaaladda Hargeysa kaasi oo ay kaga soo horjeedaan natiijadii doorashada ee habeenimadii khamiistii la soo dhaafay la shaaciyay.
Xasan Ciise Jaamac oo daba socday warar ay baahiyeen qaar ka mid ah mareegaha Internet-ka, ayaa sheegay inaanu isagu marna iclaamin wax mudaharaad ah.
“Ma Jiro wax mudaharaad ah oo aan iclaamiyay, mana garanayo xili aan ku baaqay iyo meel aan ka sheegay midna,”ayuu yidhi Xasan Ciise oo caawa u waramayay qaar ka mid ah warbaahinta.
Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in ururkiisu uu ay iskood u dejinayeen dhalinyaradda iyo taageereyasha ururkooda, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “markii ay dhacday rabashadihii maalmihii dhawayd, waxaanu ahayn kuwii iyagoo aan cidna la tashan dhalinyaradda wacyi gelinayay ee garoonka kubadda cagta Hargeysa kula hadlayay ee u sheegayay ahmiyadda nabad-gelyadda.”
“ Ma jiro wax mudaharaad ah oo aan ku baaqay maalinta Arbacadda ee beri,”ayuu saxaafadda u sheegay Md. Xasan Ciise Jaamac.
Previous PostMurashax Gaboose Ku Eedeeyay Inuu Codkiisii ku soo saaray xubno ay Isku Hayb yihiinNext PostWasiirka Warfaafinta oo Tallooyin culus u jeediyay Madaxda Saxaafadda oo uu kulan la yeeshay	Blog